ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သမီး”
မပီကလာ ချစ်စရာသမီးလေးရယ်၊ သမီးလေးကို ဆုံးမသွန်သင်စာပြပေးတတ်တဲ့ သမီးလေးမေမေရယ်၊ သမီးလေးမေးသမျှကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေတတ်တဲ့ သမီးလေးဖေဖေbloggerကြီးရယ်၊ သမီးလေးကို အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ ပြောပြတတ်တဲ့ သမီးလေးဖွားဖွားရယ်...သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးပါ။ ခုလို sweet familyအကြောင်းလေးတွေ ထပ်ရေးပါဦး ဖေဖေbloggerကြီးရေ။
:-) Big Smile . Lovely she is!
By the way, request you to make your post in full view for subscriber. Now it's only short mode and it's difficult seeing your post from google reader.I have to go direct to your blog. Regards.
အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးပါလား ကိုပေါရေ
စကားလည်းတတ် တွေးလည်းတွေးတတ် ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲမသိ။
မြန်မာစာပါ ရေးတတ်ပြီး သူ့အဖေရေးထားတာတွေ ဖတ်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ ကြီးတဲ့ ကလေးအများစုကတော့...။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်... အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ...
ပျော်စရာ မိသားစုလေးပါပဲဗျာ..ဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးမိတယ်..အစ်ကိုကြီးတို့ ဘယ်လောက်ချစ်လိုက်ကြမလဲဆိုပြီးလည်း စဉ်းစားမိပါတယ်။။
I wish , i could have one daughter like Brother Pal.
i do wish i could haveadaughter as lovely as urs.